ထုတ်ကုန်စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်သူများ
မြေပဲအခြောက်နှင့် အစိုအထွက်မြင့်သော မြေပဲကောက်ရိတ်စက် pirce
ဤမြေပဲရွေးချယ်စက်သည် မြေပဲခြောက်နှင့် မြေပဲစိုအတွက် သင့်လျော်သည်။အထူးပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Stem adsorption tape သည် ပင်စည်အား လေတိုက်မှုအောက်တွင် အပျက်အစီးများကို တစ်ကြိမ်ခွဲထုတ်စေသည်။
1. ကျိုးနှုန်းသည် 1% ထက်နည်းသည်
2. လည်ပတ်ရန် ရိုးရှင်းပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
3. မော်တာ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့် သို့မဟုတ် ဝေစာနောက်ဘက်ရိုးရိုးသို့ ဆက်သွယ်ရန် လွယ်ကူစွာ ရွေ့လျားနိုင်သည်။
4. eccentric vibrating screen structure ကို အသုံးပြု၍ အလယ်တန်းခွဲခြင်း နှင့် ခွဲခြားခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် စံပြဖြစ်သည်။
5. မြေပဲကောက်စက်သည် ပိုမိုတည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပိုမိုအားကောင်းသည့် စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ချဲ့ထွင်ထားသော ဒလိမ့်တုံးများနှင့် ပိုထူသောပစ္စည်းများကို လက်ခံပါသည်။အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ လည်ပတ်မှုကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သည်။
အလိုအလျောက် မြေပဲကောက်စက်/မြေပဲ/မြေပဲ ပေါင်းစပ်ရိတ်သိမ်းစက်/မြေပဲ ကောက်သည့် မွေးမြူရေးစက်
မြေပဲရိတ်သိမ်းစက်ကို မြေပဲရိတ်သိမ်းရန်အတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။35-80 မြင်းကောင်ရေနှင့်ကိုက်ညီ။မြေပဲရိတ်သိမ်းစက်သည် တူးဖော်ခြင်း၊ ခုတ်ထစ်ခြင်း နှင့် ထုတ်ယူခြင်းများကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အသီးအရွက်များကို ထုပ်ပိုးခြင်းမရှိဘဲ သေးငယ်သောမြေပဲစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။လုပ်သားလိုအပ်ချက်များကို လျှော့ချပေးပြီး အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။အာလူး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကန်စွန်းဥ၊ မုန်လာဥနီနှင့် ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော မြေအောက်အမြစ်သီးနှံများကို ရိတ်သိမ်းရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။၎င်းတွင် မြင့်မားသော ရိတ်သိမ်းမှု ထိရောက်မှု၊ အသေးစား ပျက်စီးမှု၊ ပေါ့ပါးသော လည်ပတ်မှု၊ တုန်ခါမှု မရှိ၊ ပိတ်ဆို့ခြင်း မရှိ၊ အမြန် filtration နှင့် စုစည်းမှု၊ ရိုးရှင်းသော ဖွဲ့စည်းပုံ နှင့် တာရှည် ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်း တို့၏ လက္ခဏာများ ပါဝင်သည်။အသုံးပြုသောမြေအမျိုးအစားများမှာ သဲမြေ၊ သဲနုံးမြေ၊ မြေလတ်မြေ၊၎င်း၏ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် လယ်သမားများကြားတွင် နှစ်များတစ်လျှောက် ရေပန်းစားခဲ့ပြီး အမြတ်အစွန်းများစွာရရှိခဲ့သည်။
မြေပဲရိတ်သိမ်းရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် မြေပဲရိတ်စက်အသေးစားဖြင့် လယ်ထွန်စက်တပ်ဆင်ထားသော မြေပဲရိတ်စက်
ပေါင်းစပ်မြေပဲကောက်ရိတ်စက်သည် အဓိကအားဖြင့် စပျစ်သီးကိုဖယ်ထုတ်သည့်ကိရိယာ၊ Clamp သံကြိုး၊ တူးထားသောဂေါ်ပြားနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။မြေပဲ မွေးမြူခြင်းနှင့် သယ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများ စည်းစနစ်ကျမှု၊ သပ်ရပ်မှုနှင့် ချောမွေ့မှုတို့ကို သေချာစေပါ။
Vine detaching device အားသာချက်-
1.1 ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံကာ မာကျောသော မြေဆီလွှာများနှင့် ကျောက်ဆောင်များနှင့် ကြုံတွေ့ရသောအခါတွင် ကွေးညွှတ်သွားမည်မဟုတ်ပေ။
1.2 ချွန်ထက်သော ခံတွင်းဒီဇိုင်း၊ ပိုင်းခြားမှု ပြီးပြည့်စုံပြီး မြေပဲပျိုးပင်များကို ကုပ်မနေပါ။
1.3 တပ်ဆင်မှု အမြင့်နှင့် ထောင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှု အားကောင်းသည်။(မြေမျက်နှာသွင်ပြင်၊ အပင်အနေအထားအရ ချိန်ညှိနိုင်သည်။)
Clamp chain အားသာချက်
2.1 ကုပ်ကြိုး၏ယိုင်ထောင့်ဒီဇိုင်း၊ ပျိုးပင်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ကောင်းမွန်ပြီး မြေဆီလွှာသည် သန့်ရှင်းသည်။
2.2 ၎င်းသည် ကြီးမားသော အဖွင့်ဒီဇိုင်းကို လက်ခံရရှိပြီး ပိတ်ချိန်သည် တိုတောင်းပါသည်။
2.3 မြေပြင်မှ ကုပ်မှတ်၏ အမြင့်သည် သေးငယ်ပြီး သီးနှံများ ရိတ်သိမ်းရာတွင် လိုက်လျောညီထွေရှိမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။
2.4 ရှေ့သို့အမြန်နှုန်း 1m/s ရှိသောအခါ၊ ကုပ်ကွင်းဆက်အမြန်နှုန်းမှာ 1.2m/s၊ ပကတိကုပ်မြန်နှုန်းမှာ 0.7m/s၊ α2+β2=92° ဖြစ်ပြီး၊ နွယ်ပင်များသည် အမြဲတမ်း အထက်သို့တက်နေပြီး အပြုသဘောဆောင်သော ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကို သဘောပေါက်ပါသည်။ .
ပြောင်းပြောင်း ပဲပုပ်ထွန်စက် Precision Seed Planter Seeder ပြောင်းစက်4တန်း ချိုသာသောစျေးနှုန်း
မျိုးစေ့၏ မျိုးစေ့နှုန်းသည် တည်ငြိမ်သည်၊ အတန်းတစ်ခုစီ၏ မျိုးစေ့နှုန်းသည် တသမတ်တည်းဖြစ်သည်၊ အစေ့များကို ထွန်ရာတွင် အညီအမျှ ဖြန့်ဝေသည်၊ အစေ့ပေါ်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသော မြေဆီလွှာ၏ အထူသည် အခြေခံအားဖြင့် တူညီသည်၊ မျိုးစေ့ကွဲထွက်နှုန်း နည်းသည်၊ တွင်းအရေအတွက်၏ အရည်အချင်းပြည့်မီမှုနှုန်း မြင့်မားပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီသော စပါးအကွာအဝေးနှုန်း မြင့်မားသည်။ကောင်းမွန်သော မြေဆီလွှာအခြေအနေဖြင့် လယ်ထွန်ခြင်းမပြုဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပြောင်းဖူး ဘက်စုံသုံး ခြွေလှေ့ နှင့် ခြွေလှေ့ အကြီးစား ဒီဇယ်ဂျုံ ခြွေလှေ့
ဤကြီးမားသော ဘက်စုံသုံး ခြွေလှေ့စက်တွင် ရွေးချယ်ထားသော ခြွေလှေ့ယူနစ်များ၊ ခွဲခြားယူနစ်များ၊ သန့်ရှင်းရေးယူနစ်များ တပ်ဆင်ထားပါသည်။ဤခြွေလှေ့ခြင်း၏ အလုံးစုံအားသာချက်များမှာ- ၁။ သန့်ရှင်းသောခြွေလှေ့ခြင်း၊2. ရိတ်သိမ်းထားသော အစေ့အဆန်များ၏ အညစ်အကြေးပါဝင်မှု နည်းပါးခြင်း၊3. ကျိုးပဲ့သော အစေ့အဆန်များ နည်းပါးပြီး ပျက်စီးမှုနည်းသည်။4. နှစ်ထပ်အစာဝင်ပေါက်များ၊ မတူညီသောသီးနှံများအတွက်သင့်လျော်သော 5. ရွှေ့ရလွယ်ကူသည်။6. ခိုင်မာသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပျက်စီးရန်လွယ်ကူသည်;7. ကျစ်လစ်သောအရွယ်အစား;8. မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်။
စက်ရုံတိုက်ရိုက် ဘက်စုံသုံး အာလူး ကန်စွန်းဥရိတ်စက် ရောင်းချပေးသည်။
Chens-lift ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သော အာလူးရိတ်သိမ်းစက်သည် အတန်းအကွာအဝေးအတွက် သင့်လျော်သော မြင်းကောင်ရေ 18-800 မှ စုစုပေါင်း ပါဝါမော်ဒယ် 13 ခု ရှိသည်။အသက်ရှည်ခြင်းနှင့် အခြားသော အကျိုးကျေးဇူးများ။အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ နယ်ပယ်လိုအပ်ချက်အရ မတူညီသော မော်ဒယ်များကို ဝယ်ယူနိုင်သည်။
1. အစာအပြည့်ကျွေးသော အမျိုးအစား- ပျိုးပင်များကို တိုက်ရိုက်လွှင့်ပစ်လိုက်ရုံဖြင့် ပျိုးပင်များကို အလိုအလျောက် ခွဲထုတ်ပါမည်။
2. အခြောက်နှင့် အစိုနှစ်မျိုးလုံး အသုံးပြုမှု- မြေပဲခြောက်၊ လတ်ဆတ်သော ပန်းပွင့်များကို အသီးခူးရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
3. ထိရောက်မှု၊ ကောက်နှုန်း99% ထက် ပိုကောင်းတယ်, ဆုံးရှုံးမှုနှုန်း 1% ထက်နည်းသည်။
4. တာယာကြီး နှစ်လုံးရွှေ့ရလွယ်ကူသည်။လယ်ကွင်းနှင့် ခြံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်သည်။
5. ရွေးချယ်နိုင်သော38-70 ကောင်ရေထွန်စက် PTO.
6.ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုဓာတ်လှေကား: ဒရမ်ကြီး၊ အထူပစ္စည်း
မြေဆီလွှာရှိ ကျောက်များကို ဖယ်ရှားရာတွင် အခက်အခဲပြဿနာများနှင့် ကုန်ကျစရိတ် ကြီးမြင့်သော သန့်ရှင်းရေးကိစ္စများကို ဖြေရှင်းရန်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် ကျောက်ကောက်စက် 4UQL-1600 အမျိုးအစားသစ် ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။IIIမြင်းကောင်ရေ ၁၂၀ အား တပ်ဆင်ထားသည့် လေးဘီးတပ် ထွန်စက်၊သုံးမှတ်ထွန်စက်မှတစ်ဆင့် ကျောက်ကောက်စက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။လယ်ထွန်စက်ကို လှမ်းမောင်းပြီး ကျောက်ကောက်တဲ့အလုပ်။တူးဖော်ထားသောဓားသည် ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့် မြေဆီလွှာများကို ရိတ်သိမ်းရန် မြေဆီလွှာထဲသို့ ဝင်ရောက်ကာ သီးနှံများနှင့် မြေဆီလွှာများကို အနောက်ဘက်ရှိ ဗုံထဲသို့ ပြေးဝင်သွားစေသည်။ဒရမ်လည်ပတ်မှုမှတစ်ဆင့် မြေဆီလွှာသည် ယိုစိမ့်ပြီး ကျောက်များကို သယ်ယူပေးသည့် ခါးပတ်မှတဆင့် တင်ဆောင်သည်။
JP Series လေဆာ မြေညှိစက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ 1JP စီးရီးလေဆာမြေညှိစက်ကို လယ်ထွန်စက်များနှင့် အသုံးပြုပါသည်။စိုက်ပျိုးရေကို ချွေတာနိုင်ခြင်း၊ အထွက်တိုးခြင်း၊ ဓာတ်မြေသြဇာ သုံးစွဲမှုနှုန်း တိုးမြင့်လာခြင်း၊ မြေအသုံးချမှုနှုန်း တိုးမြင့်လာခြင်း၊ မြေယာလည်ပတ်မှု ထိရောက်မှု တိုးမြင့်လာစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသော ခြောက်သွေ့သော မြေပြန့်တွင် လယ်ကွင်းလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။
ဤထုတ်ကုန်၏ဘောင်ဖွဲ့စည်းပုံသည် သေးငယ်သောလည်ပတ်ဝန်၊ မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု၊ လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သောမြေသြဇာစသည်တို့ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေပြန့်နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးတွင် အကောင်းဆုံးစက်ဖြစ်သည်။
12PJS စီးရီး နက်ရှိုင်းသောလျော့ရဲသော လေဆာ grader
နက်ရှိုင်းသောလျော့ရဲသောလေဆာ grader သည် မြင်းကောင်ရေအားမြင့်ထွန်စက်များအသုံးပြုသည့် မွေးမြူရေးစက်တစ်ခုဖြစ်သည်။အတန်းများကြားတွင် မြေဆီလွှာ စိုက်ပျိုးရာတွင် စက်မှုလယ်ယာကို အဓိကအသုံးပြုသည်။သာမန်လေဆာ graders များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပြင်၊ ၎င်းတွင် မြေဆီလွှာထယ်လွှာ၏ဖွဲ့စည်းပုံအား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ထယ်၏အောက်ခြေကို ချိုးဖျက်ခြင်း၊ ရေသိုလှောင်မှုနှင့် မြေဆီလွှာစိုစွတ်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည့် နက်နဲသောလျော့ရဲသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိပါသည်။ စပါးကြီးထွားမှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။
12PJZ စီးရီး self-balancing လေဆာ grader
12PJZ စီးရီး Self-balancing လေဆာ grader သည် လက်ခံရန် dual receiver သို့မဟုတ် single receiver ကိုသုံးနိုင်သည်။လက်ခံသူတစ်ခုတည်းဖြင့် လက်ခံသောအခါ၊ ၎င်းကို သာမန်အတန်းအစားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။နှစ်ဆလက်ခံသောအခါ၊ ၎င်းသည် မြေပြင်နှင့် ဆက်စပ်ထောင့်ကို အမြဲထိန်းထားရန်၊ ၎င်းသည် ကွက်လပ်တစ်ခုလုံးကို လျှောစောက်မရှိအောင် ကာကွယ်နိုင်သည်။အကွက်တစ်ခုလုံး၏ထောင့်များသည် အသေထောင့်များကင်းစင်ပြီး အကွက်တစ်ခုလုံးသည် လုံးဝအလျားလိုက် သို့မဟုတ် အလျားလိုက်ဖြစ်နေနိုင်သည်။
12 PJD စီးရီး Folding Laser Land Leveler
1. arched traction structure သည် frame ကို ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ပေးမည့် traction force အတွက် buffer ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
2.ခြစ်ရာ၏ fulcrum သည် နောက်သို့ ရွေ့လျားပြီး အောက်သို့ ရွေ့သွားသဖြင့် ခြစ်ရာ တက်လာလိုက်နှင့် ပြုတ်ကျသောအခါ ထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူစေသည်။လှိုင်းတွန့်ပုံသဏ္ဍာန်ကို လျှော့ချရန် အလုပ်လုပ်သောအခါ ပြုတ်ကျရန် မလွယ်ကူပါ။
3.Folding scraper သည် passability ကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်လမ်းလျှောက်သောအခါခြစ်ရာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအလုပ်လုပ်သောအခါခြစ်ရာကိုချပေးသည်၊ အလုပ်အကျယ်ကိုတိုးမြှင့်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေသည်။
4.Scraper ၏ထောင့်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။မတူညီသောမြေဆီလွှာအရ၊ scraper သည် အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်သည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိစေရန် ခြစ်ရာ၏အလုပ်လုပ်ပုံထောင့်ကို အအပြန်အလှန်ထိန်းညှိပေးမည်ဖြစ်သည်။
မြေပဲကျွေးခြင်း၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ နိယာမ...
ပြောင်းနှင့် ပဲပုပ်စိုက်ခင်းများကို တရုတ်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည်။